Mpanamboatra System Jacking | Teknolojia avo lenta sy avo lenta - Hery mandrakizay
Ireo drafitra na fikirakirana rafitra jacking ireo dia azo aorina amina endrika marobe amin'ny alàlan'ny fampiasana boaty volo, motera, boaty fihenam-bidy, alàlan'ny fiara, fitambarana, sakana plummer ary fitaovana fanaraha-maso.
Efatra amin'ireo fikirakirana rafitra lehibe indrindra dia ny rafitra Hing, 'U', 'T' ary 'I' namboarina. Jereo fa ny jacks maratra maromaro dia azo ampifandraisina amina robotika na elektrika. Ny faharoa dia manampy raha tsy misy toerana fampifandraisana ny shaft drive.
Rafitra fanamafisam-peo H-Configuration
Rafitra Jacking T-Configuration
Rafitra fanangonana U-Configuration
Ahoana ny fiasan'ny rafitra Jacking
Ny vokatra «jack» dia misy toerana itodihana am-pandihizana mba hahazoana fihetsika mahitsy. Ny fandaminana ny rafitra jack jack dia azo fantarina amin'ny ankapobeny amin'ny hoe "system jacking".
Ny fotoana ahafahana mampifandray amin'ny fomba maoderina ny jacks screw maromaro ka mamindra symphony izy ireo dia anisan'ny tombony lehibe azony. Ny drafitra mahazatra dia misy jack jack, boaty fitaovana bevel, motera, boaty fihenam-bidy, shaft drive, couplings ary block plummer.
Jacking Systems dia manana endrika roa voalohany:
Avelan'izy ireo ny fivezivezena entana goavambe entin'ny motera tokana ohatra: 4 x ME18100 visy visy napetraka ao anaty rafitry ny visy afaka mamindra 400 Te (4000kN) betsaka.
Ny enta-mavesatra dia mitentina mihoatra ny faritra somary midadasika ohatra ny 20Te manavesatra mihoatra ny velarana 24m2 mampiasa palitao efatra misy elanelam-potoana 6m x 4m.
Matetika ny rafitra jacking dia mifandray amin'ny robotika eo anelanelan'ny entana atosika ao anatin'ny rafitra. Na izany aza hita ihany koa ireo rafi-pifandraisana nomerika. Mandritra ireo rafitra ireo, ny jack jack dia misy motera tsirairay ary ampifandraisina amin'ny rafitra fanaraha-maso elektronika sy ny valiny mihidy. Mety hitarina koa izy io mba hahazoana antoka fa maro ny rafitra jacking mifandray amin'ny robotika no ampifanarahina / fehezina nomerika mamela ny fomba mihetsika mihetsika mahitsy hahazo tolotra amin'ny ambaratonga lehibe.
Izy io dia namela ny Power Jacks hanome ny vahaolana amin'ny rafitra jacking amin'ny ankamaroan'ny sehatra. Ny tontolon'ny famokarana, na amin'ny vy, na sivily, na fiara, na taratasy na angovo dia ho mpampiasa voalohany amin'ny rafitra jacking, na izany aza ny fampiharana, ohatra, ny kianja, ny fifandraisana ary ny fikarohana dia mampiasa ny rafitra jacking misy endrika lehibe sy kely.
Na inona na inona ny fampiharana Power Jacks dia manana ny fahatakarana sy ny traikefa izay miantoka ny mpividy fa hahazo ny vahaolana farany tsara indrindra jacking system.